Global Voices teny Malagasy » Tatitra Tsy Miankina Manolotra Fahitana Manahirana Momba Ny Zo Nomerika Ao Ekoatera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Desambra 2016 13:53 GMT 1	 · Mpanoratra Daniela Gallardo Nandika (en) i Scott Griffen, miora
Sokajy: Ekoatora, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka
Sary nalaina avy amin'ny Pikabaym ary navoaka teo ambany lisansa CC0 ho toy ny sehatra iraisan'ny daholobe.
Misy maro ireo olona malaza amin'ny politika any Ekoatera. Iray amin'ireo olona malaza ireo i Martha Roldós, mpikambana teo aloha tao ami'ny parlemanta avy amin'ny Guayaqui; nalaza tamin'ny fanoherany mahery vaika ny fitondran'ny filoha Rafael Correa. Tamin'ny 2014, niteny tamin'ny haino aman-jery i Roldós hoe nisy “nanafika” ny kaontiny imailaka , nolazainy fa taratasy iray nalefa tao amin'ny kaonty imailaka azy manokana no nisy nangalatra ary namoaka “teny isan-teny” tao amin'ny gazety tantanan'ny fanjakana El Telégrafo”.
Nosoratan'i Adam Isacson (mpikambana iray ao amin'ny fandaharan'asan'ny politikan'ny fiarovana Rezionaly ao amin'ny birao any Washington any Amerika Latina) io imailaka io, ary nalefa hoan'i David Holiday ao amin'ny (OSF), Fikambanana mpanao asa soa Open Society. (Fanamarihana ho an'ny mpamaky: mandray ny sasany amin'ny fanampiany avy amin'ny OSF ny Global Voices.) Nandefasana dika mitovy i Roldós ao amin'ilay fifandraisana. .
Tamin'ny famoahana ilay taratasy, nitatitra koa ny El Telégrafo hoe mikasa ny hametraka “tetikasa haino aman-jery” any Ekoatera i Roldós sy olona maro hafa. Ny tetikasan'i Roldós , Fundación Mil Hojas  (Fikambanana Arivo Pejy), dia efa nisy nandritra ny herintaona araka ny fisehoany. Mifantoka amin'ny fanaovana gazety fanadihadiana, mitatitra indrindra indrindra ny mangarahara sy ny kolikoly – olana izay matetika no nibahan-toerana tao an-tsain'ny haino aman-jery nasionaly.
Hatramin'ny raharahan'i Roldós, any anaty sarimihetsika ihany no hitanao ity fanafihana an-tserasera sy famoahana ny mombamomba ny olona manokana any Ekoatera ity.
Tamin'ity taona ity, namoaka tatitra hafa ho an'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'olombelona  ny vondrona misy an'i Roldós – miaraka aminà fikambanana Ekoatoriana hafa antsoina hoe Usuarios Digitales  (Mpampiasa fitaovana Nomerika), mialohan'ny fihaonana ara-potoana fandinihana ny zon'olombelona amin'ny May 2017. Ny tena ifantohan'ny tatitra dia ny toe-draharahan'ny firenena miaraka amin'ny zo hanana fiainana manokana nomerika manokana sy hahazoana vaovao .
Ny Universal Periodic Review (UPR) – Fandinihana Ara-potoana Erantany- dia rafitry ny Filankevitry ny Zon'olombelona mba ho fanatsarana ny toe-draharahan'ny zon'olombelona any amin'ny faritr'ireo firenana 193 mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana. Tamin'ny 2012 ny UPR farany tany Ekoatera. Slovakia, Kanada, Norvezy, Letonia, Belzika, Frantsa ary Kostà Rikà, ankoatry ny hafa, dia samy nametraka fanamarihana momba an'i Ekoatora momba ny toetoetry ny fahalalahana maneho hevitra sy manana fikambanana, ny tsy fandraisana ho heloka be vava ny endrikendrika, ary ny fahaleovantenan'ny haino aman-jery, ankoatry ny teboka hafa.
Niresaka tamin'i Alfredo Velazco, mpikambana iray ao amin'ny Usarios Diditales izahay, izay nilaza fa ny tatitra dia mitsara ny fomba fiasan'ireo mpisehatra samy hafa amin'izao fotoana izao mba hamonoana ny votoaty (voalohany amin'izany ny votoaty manohintohina an'ireo ao amin'ny fitondrana) aminà fomba tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Misy fizarana dimy ny tatitra, izay ho hadihadiantsika araka izany.
Fiainana manokana sy fanarahamaso
Lazain'ilay tahirin-kevitra fa i Ekoatora dia nanatri-maso fanitsakitsahana zon'ny fananana fiainana manokana nampiasaina mba hahazoana torohay izay avyeo nampiasain'ireo manampahefan'ny fanjakana tao amin'ny fahitalavi-pirenena ary tamin'ny fandaharan'ny filoha Correa rehefa asabotsy.
Mandray ny olan'ny fiarovana an-tserasera sy ny fanarahamason'ny fanjakana ilay tatitra. Toy izany koa, tatitra isan-karazany no nanasongadina izay noheverina ho nifanarahan'ny Sekretaria Nasionalin'ny sampam-pitsikilovan'ny Governemanta Ekoatoriana taminà orinasa Italiàna “Ekipa mpihetraketraka informatika” tamin'ny 2013.
Araky ilay tatitra, “Tarika mpisompatra informatika: rindrankajy mpitsikilo any Amerika Latina “, nanome tolotra ho an'ny Minisitry ny Atitany tamin'ny tapaky ny volana jona 2015 ilay orinasa Italiana. Notondroin'ity farany ny filàny “Foibe Nasionaly Fanarahamaso mahenika ny firenena” izay mety ho afaka hanomboka hiasa ny Oktobra 2016. Ity tatitra ity, izay mifototra amin'ny vaovao navoakan'ny Associated Press, dia milaza fa “avy amin'ireo taratasy elektronika niparitaka no nivoahan'ny porofo fa ny governemantan'i Rafael Correa dia nampiasa ilay rindrankajy mpitsikilon'ilat Tarika Mpisompatra mba hanarahana maso an'i Carlos Figueroa, mpikatroka amin'ny haino aman-jery sy politika, izay notazonina an-tranomaizina nandritra ny volana enina noho ny “nanompàny ny filoha”
Tsy filazana ny anarana: Fanafihan'ny mpisompatra
Mitatitra ny Usarios Digitales fa efa nanao fanamarihana momba ireo kaonty sandoka anaty tambajotra ara-tsosialy izay nampiasaina mba hanapariahana fandrahonanana ho an'ireo maneho hevitra manohitra ny fomba fijerin'ny governemanta Correa. Fanampin'izay, nohadihadian'ilay vondrona ny fomba nanehoana ny fanenjehana an-tserasera. Ohatra, navoakan'ireo manampahefana ny anarana sy ny torohay manokan'ireo mpampiasa haino aman-jery mafana fo. Angamba ny raharaha izay manandanja indrindra amin'ny vahoaka dia ny tantaran'i “Crudo Ecuador ”, izay nanesoan'ny Filoha Correa an-tserasera an'i Gabriel Gonzales tamin'ny nandaozany ny Aterineto.
Teto no nidiran'i Marta Roldós, mpanohitra mahery vaika ny filoha any Guayaquil. Tamin'ny 2014, nametraka fitakiana hanaovana fikarohana izy, niaraka tamin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna any Guayaquil, hanenjehana ny mpanoratry ny El Telégrafo Orlando Pérez. Ny tanjon'ny fitakiana dia ny hahita ny loharanon'ny vaovao navoakan'ny El Telégrafo, izay nanaporitsaka fa nitady famatsiambola avy any ivelany mba hananganana masoivohom-baovao i Roldós. Na izany aza tsy nivoatra ny raharaha.
Fanakanana ny Aterineto sy antsojay an-tserasera nanjo ireo sehatra fanaovan gazety
Ary farany, nisy fampanginana nomerika tany Ekoatera tamin'ny 2014, izay lazan'ilay tatitra ho nanelingelina ny fidirana tamin'ireo vohikala toy ny Youtube sy Google tamin'ny 28 Martsa 2014, teo anelanelan'ny 7:20 sy 7:53 hariva. Nitranga izany taorian'ny andro nivoahan'ireo imailaka manokana izay voalaza fa an'i Rommy Vallejo, filohan'ny Sekretaria Nasionalin'ny Sampam-pitsikilovana, tao amin'ny bilaogy iray antsoina hoe “Anonymous Ecuador”, sehatra ho an'ny bilaogera ao amin'ny Google.
Milaza koa ny tatitra fa ny Fundación Mil Hojas, Plan V , sy Focus Ecuador  dia nitatitra fisianà “fanafihana an-tserasera” nanjo ny tranonkalany tamin'ny May 2016. Ny andro talohan'izay, namoaka vaovao momba ny fifanarahana ara-tsolika sy ny fandraisana anjaran'ny solontena voalohan'ny Petroecuador sy ny minisitry ny solika teo aloha ireo tranonkala ireo.
Fanampin'izany, resahan'ilay tatitra ny momba ireo mpisompatra izay mampitahotra ireo mpanao politika mpanohitra, mpanao gazety, ary olom-pirenena manohitra ny fitondrana.
Asehon'ilay tatitra ihany koa ny fomba iadian'ny fiarahamonina sivily any Ekoatera mba hitazonana ny zo nomerikan'izy ireo. Ho an'i Alfredo Velazaco, “misy fahabangàna goavana ny fahalalàna ity olana ity, sy tsy fisian'ny habaka izay mety hampanan-karena ny adihevitra. Noho ny toe-draharaha ao amin'ny firenena, nailika any amin'ny toerana faharoa ny zo nomerika sy ny fivezivezen'ny vaovao. Ireo eo amin'ny fitondrana no mandray tombontsoa avy amin'izay tsy fahampian'ny fahalalana izay mba hisakanana vaovao tsy niriana tsy hivoaka sy tsy ho zaraina.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/18/92612/
 nisy “nanafika” ny kaontiny imailaka: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/15/nota/2033041/martha-roldos-denuncia-invasion-su-correo
 nitatitra : http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/la-agencia-tamia-news-se-construiria-como-soporte-para-una-red-internacional-de-medios-de-oposicion
 Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'olombelona: http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
 zo hanana fiainana manokana nomerika manokana sy hahazoana vaovao: http://www.usuariosdigitales.org/wp-content/uploads/2016/10/EPU-Informe-Final-2-1.pdf
 Tarika mpisompatra informatika: rindrankajy mpitsikilo any Amerika Latina: https://www.scribd.com/document/308453773/Malware-Para-La-Vigilancia-1#fullscreen&from_embed
 Plan V: http://www.planv.com.ec/